Nakhu abantu abashoyo ngentengo yasentwasahlobo ye-koil matimress
I-Aldworth MS yengezwe: , inkampani yokufaka uphawu ebeka uphawu enkantolo yaseCanada enefektri ye-Seaning Product Product yaseChina, yavula isitolo sokuqala se-China
Ngoba izitshalo ezikhulayo zikhula zinamandla. Kepha ngisho nensimu eyakhiwe ihlala ihlaselwa ukhula. Kunamasu amaningana ongawasebenzisa ukunciphisa lokhu kuhlupheka. Amathiphu alandelayo azosiza ukukunikeza umphetho phezu kokhula futhi wenze ingadi yakho ibukeke ihamba phambili. Suck kancane ngasikhathi, kepha ncama kancane.
Umdlali we-Star: UNicklas Heshenius, 22, 22Year-Striker wakudala afanelekile ukuba yi-dane enkulu. Isidlali sokugcina saseDenmark sonyaka sithole i-1 pound. 2 million kanye nesengezo kanye nonyaka owedlule ngonyaka wokugcina wenkontileka. I-Danish International Okokuja eneminyaka engama-20 ubudala yenqabe ukuthuthela kwezigidi ezingama-